Mmiri mmiri na-adịghị emebi emebi maka nkwekọrịta Electronic China Manufacturer
Nkọwa:Mmiri Nhicha Na-enweghị Nzuzo maka Nkọwa,Mmiri nhicha maka Nkọwapụta Electronic,Mmiri mmiri na-abaghị uru maka nkwekọrịta Electronic
Home > Ngwaahịa > Hydrofluoroether Cleaning Agent > Ngwọta Nhicha Maka Nkọwapụta Electronic > Mmiri mmiri na-adịghị emebi emebi maka nkwekọrịta Electronic
Ihe Nlereanya.: H0450
Ubu oke: 100000KG
Akwụkwọ: SGS, MSDS
Ngwọta nhicha nke HFE nwere ihe dị mma na-esi esi esi nri, ọ pụkwara itinye ya n'ọrụ dịgasị iche iche na-ekpuchi ihe dị iche iche. Hydrofluoroether detergent bụ ngwaahịa na-friendly-ngwaahịa, nke bụ na-enweghị ntụpọ na odorless, ma na-abaghị uru na-adịghị njọ, ma dịpụrụ adịpụ. Onye na-edozi mmiri hydrofluoroether bụ onye na-abaghị uru nke nnukwu dielectric mgbe nile, obere ala elu, obere viscosity, mfe volatility na-enweghị ihe fọdụrụ na ezi kwụsie ike. HFE hydrofluoroether nwere ike gbasaa ma gbasasịa n'elu ihe ndị dị na ihe dị iche iche na pores dị iche iche, ma nwee mmetụta dị mma na ncha, mgbochi, nkwụsị na nhicha. Hexafluoropropyl methyl ether na-ejikarị ya mee ihe n'ọtụtụ nhicha nke ihe onwunwe ziri ezi, dịka nhichapụ nhazi kọmputa, PCB, batrị kọmputa, akụkụ nke ọma, nhicha nke ákwà dị iche iche / lenses, semiconductor, LCD na diski ike wdg, na a pụkwara iji ya mee ihe na ihichapu, nchọpụta leak ma ọ bụ ikuku ule ule, na ihe mgbaze.
Àgwà nke Hfe Codorless Cleaning Solution:
1.HFE Nsogbu dị elu na viscosity, Ọ nwere ike ịgbasa gbasaa ma gbasaa n'elu ihe onwunwe na pores dị iche iche, ma nwee mmetụta dị mma na ncha, nsị, nkwụsị na nhicha;
2. Ngwọta Nhicha Maka Nkọwapụta Electronic ezigbo mkpuchi ọkụ eletrik, ọ pụkwara ịdị ọcha ma ọ bụrụ na ịmepụta aha, ma nwee ike imezi ebe ọrụ;
3 . Ihe ntanetịcha na ntanetị dị mma (54 ℃), ọ nwere ike itinye aka na ihe dị iche iche na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, ọ pụkwara ikere òkè n'ime akụkụ ahụ jụrụ oyi n'oge ikuku na nhicha. adịghị ize ndụ ngwongwo , nke na-ere ọkụ ma ọ bụ nke na-adịghị emerụ, enweghị ọkụ ma ọ bụ ebe ọkụ;
4. Hydrofluoroether Ezi fluidity, mfe volatility na-enweghị onye fọdụrụnụ, na ike ịrụ ezigbo ọrụ na ọgwụgwọ ọrịa;
5. Ngwọrọgwụ Hydrofluoroether Inert Cleaning Agent abụghị nsi na ihe na-adịghị njọ, ọ bụghị - mkpasu iwe;
6. MGBE ị na-ehicha mmiri dị ọcha na gburugburu ebe obibi, nwere ODP uru nke 0 na ọnụ ala GWP dị oke ala;
7. E nwere ike imegharị mmiri mmiri mgbe ị na-ehichapụ ya, si otú ahụ belata ọnwụ , chekwaa ụgwọ.
Ngwaahịa physicochemical ngwaahịa:
Ngwọta maka nhicha
Ngwaahịa a bụ onyinye nke Hydrofluoroether. Ọ bụ ihe na gburugburu ebe obibi-enyi na enyi ngwaahịa, nke bụ ma colorless na odorless, ma poisonless ma adịghị njọ , ma dịpụrụ adịpụ. Enwere ike iji ya mee ihe dị iche iche maka nhicha nke ihe onwunwe ziri ezi, dịka nhichapụ nke batrị kọmputa, PCB, components eletrọniki, akụkụ nke ọma, nhicha nke ákwà ngebichi / lenses, semiconductor, LCD na ike disk wdg, na nwekwara ike-eji maka dewatering ma ihicha , nchọpụta leak nke igwe eletrik ma ọ bụ ule ikpuchi ikuku, na ihe mgbaze.
Nkwakọ ngwaahịa, nchekwa na njem:
Ngwurugwu Chemical Cleaning a jupụtara 25kg / gbọmgbọm, ma ọ bụ maka nhazi nke ndị ahịa, dị mfe echekwara ma bufee ya.
Ngwaahịa : Hydrofluoroether Cleaning Agent > Ngwọta Nhicha Maka Nkọwapụta Electronic
Hexafluoropropyl methyl ether ngwọta nhicha Kpọtụrụ ugbu a
Onye na-enweghị ntụpọ maka kọntaktị Electronic Kpọtụrụ ugbu a
Onye na-ehichapụ HFE dị ọcha maka nkwekọrịta Electronic Kpọtụrụ ugbu a
Mmiri mmiri na-adịghị emebi emebi maka nkwekọrịta Electronic Kpọtụrụ ugbu a
HFE Hydrofluoroether maka mgbatị nke Electronic Kpọtụrụ ugbu a
Mmetụta mmiri na-ekpo ọkụ na gburugburu ebe obibi maka nkenke Kpọtụrụ ugbu a
HFE Ogwu na-abaghị uru na onye na-adịghị emerụ ahụ maka nkenke Kpọtụrụ ugbu a
Mgbu na nchedo gburugburu ebe obibi HFE Kpọtụrụ ugbu a
Mmiri Nhicha Na-enweghị Nzuzo maka Nkọwa Mmiri nhicha maka Nkọwapụta Electronic Mmiri mmiri na-abaghị uru maka nkwekọrịta Electronic